विद्यालय कसरी छान्ने ? | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी विद्यालय कसरी छान्ने ?
नेपालका हिमाली भेगबाहेक अन्य स्थानमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको छ । विद्यार्थीका साथै अभिभावकका लागि समेत यो चासो र जिज्ञासाको विषय हो । अझै पनि कतिपय आमाबुबालाई सही विद्यालय छनोटमा अन्योल हुने गरेको छ । यही अन्योलकै कारण उनीहरू छोराछोरीको भर्ना नगरीकनै विद्यालय पठाइरहेका छन् ।
आफ्ना छोराछोरी कुन विद्यालयमा भर्ना गर्ने भनेर अभिभावक दोधारमा पर्नु स्वाभाविक पनि हो । किनभने निजी विद्यालयले गरेका विज्ञापन, देखाएका सपना र भावी योजना सुन्दा यो पनि ठीक, ऊ पनि ठीकजस्तो लाग्छ ।
अहिले पनि विद्यालयहरूले परीक्षामुखी पढाइ गरिरहेका छन् । विद्यार्थी उत्तीर्ण त हुन्छन्, तर वास्तविक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधानमा वा व्यावहारिक जीवनमा त्यो प्राप्तांकले कुनै सघाउ पु¥याउँदैन । त्यसैले विद्यालय रोजाइको एउटा पाटो त्यहाँ के पढाइन्छ, कस्तो पढाइन्छ र कसरी पढाइन्छ भन्ने पनि हुनुपर्छ । शिक्षालाई वास्तविक जीवनस“ग सान्निध्य नगरीकन घोकन्ते पढाइलाई जोड दिने कुनै पनि विद्यालय रोजाइका लागि प्राथमिकतामा पर्नु हु“दैन । यसका लागि विगतको उसको उत्पादन र उत्पादित जनशक्तिले उच्च शिक्षामा प्राप्त गरेको सफलताका साथै व्यावहारिक जीवनमा उनीहरूले व्यतीत गरेको जीवनशैलीलाई सूचकका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
विद्यालय छनोटको एउटा महŒवपूर्ण पाटो विद्यालय अनुमतिप्राप्त हो/होइन यकिन गर्नु पनि हो । स्थानीय तहसँग सरोकारवाला विद्यालय कुन तह, कति कक्षासम्म सरकारद्वारा अनुमति प्राप्त गरेको हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय आर्थिक पक्ष पनि हो । भर्नाका बेला अति नरम भई रकमकलममा छूटको प्रलोभन देखाउने, खाजा स्टेशनरीदेखि बस भाडामा समेत छूटको प्याकेज तेस्र्याई भर्ना गर्ने अनि कहिले परीक्षा फारम भर्दा त, कहिले परीक्षाका बेला यो वा त्यो बहानामा पहिला भनिएको छूटको साँवा ब्याजसमेत असुल्नेगरी दस्तुरपत्र (बिल) पठाएर अभिभावकको ढाड सेक्ने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ ।
विद्यालय छनोटको अर्को पाटो भयरहित वातावरण छ/छैन हेर्ने पनि हो । सरकारले शैक्षिक संस्थालाई बालमैत्री बनाउन आह्वान गरी सामुदायिक विद्यालयमा बालमैत्री सिकाइ एक किसिमले लागू गरिसकेको पनि छ । तर आज पनि विद्यालय यस्ता छन्, जहाँ डर, त्रास र भयकाबीच सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । त्यसैले बालमैत्री विद्यालय र भयरहित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको सुनिश्चितता हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी कस्ताखाले बच्चा कुन समुदायबाट आउने गर्छन्, यसलाई पनि विद्यालय छनोटको एउटा आधार बनाउनुपर्छ ।